Nehemaya Ruziri Mgbidi Jeruselem | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
N’oge Ezra, e nwere onye Juu aha ya bụ Nehemaya. Ọ na-ejere Eze Atazaksis ozi. Nehemaya bi n’obodo Shushan nke dị na Peshia. Nwanne Nehemaya si Juda bịa Babịlọn ma kọọrọ ya otú ihe si kwụrụ na Jeruselem. Ọ gwara ya, sị: ‘Ndị Izrel si na Babịlọn lọta nọ n’ọnọdụ ọjọọ. A rụghachibeghị mgbidi Jeruselem na ọnụ ụzọ ámá ya ndị Babịlọn bibiri.’ Ihe a wutere Nehemaya. Ọ bụ ya mere o ji chọọ ịga Jeruselem ka o nyere ha aka. N’ihi ya, ọ rịọrọ Chineke ka o mee ka eze kwe ya ka ọ gaa.
Eze mechara chọpụta na ihu gbarụrụ Nehemaya. Ọ gwara Nehemaya, sị: ‘Ahụtụbeghị m ebe ihu gị gbarụrụ otú a mbụ. Gịnị mere?’ Nehemaya gwara ya, sị: ‘Gịnị mere m na-agaghị agbarụ ihu ebe ọ bụ na a rụghachibeghị obodo anyị bụ́ Jeruselem e bibiri ebibi?’ Eze jụrụ ya, sị: ‘Olee ihe ị chọrọ ka m meere gị?’ Ozugbo ahụ, Nehemaya kpere ekpere n’obi ya. Ọ gwaziri eze, sị: ‘Biko, hapụ m ka m gaa Jeruselem rụghachi mgbidi ya.’ Eze gwara ya ka ọ gaa. Ọ hazikwara otú ọ ga-esi gaa ka ihe ọjọọ ghara ime ya n’ụzọ. O mekwara Nehemaya gọvanọ Juda ma bunye ya osisi ọ ga-eji rụọ ọnụ ụzọ ámá Jeruselem.
Mgbe Nehemaya rutere Jeruselem, ọ gara chọpụta otú mgbidi Jeruselem dị. Mgbe ọ chọpụtachara ya, ọ kpọkọtara ndị nchụàjà na ndị isi ma gwa ha, sị: ‘Otú ihe si dịrị adịghị mma. Ka anyị meenụ ihe.’ Ha kwetara ihe o kwuru ma malite ịrụghachi mgbidi Jeruselem.
Ma, ụfọdụ ndị iro ha malitere ịchị ha ọchị, ma sị ha: ‘Ihe a unu na-arụ, nkịta ọhịa mesa ya ahụ́, ọ daala.’ Ndị Izrel gbachiri ha nkịtị ma rụrụ ihe ha na-arụ na-aga. Ha rụliri mgbidi ahụ elu, rụsiekwa ya ike.
Ndị iro ahụ kpebiri na ha ga-esi ebe dị iche iche bịa lụso ha ọgụ na Jeruselem mgbe ha na-amaghị. Mgbe ndị Juu nụrụ ya, ụjọ tụrụ ha. Ma, Nehemaya gwara ha, sị: ‘Ụjọ atụla unu. Jehova nọnyeere anyị.’ Nehemaya dowere ndị nche ka ha na-eche ndị ahụ na-arụ ọrụ nche. Ọ bụ ya mere na ndị iro ha emelighị ha ihe ọ bụla.
Ndị Izrel ji abalị iri ise na abụọ rụchaa mgbidi ahụ na ọnụ ụzọ ámá ya. Mgbe ha rụchara ya, Nehemaya kpọkọtọra ndị Livaị niile na Jeruselem ka ha nyefee ya Jehova. O kere ha ụzọ abụọ ka ha bụọ abụ. Ha si n’ebe e si agbago Ọnụ Ụzọ Ámá Isi Iyi gbagoro n’elu mgbidi ahụ. Ụfọdụ si n’aka nri, ndị ọzọ esi n’aka ekpe gaa obodo ahụ gburugburu. Ha gburu opì na ájà, kpọọ ụbọ akwara, bụọkwara Jehova abụ. Ezra duuru otu ụzọ gawa, Nehemaya eduru ndị nke ọzọ gawa ruo mgbe ha ruru n’ụlọ nsọ ahụ. Mmadụ niile, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ma ụmụntakịrị chụụrụ Jehova àjà, meekwara ya ememme. Obi tọrọ ha ezigbo ụtọ nke na ndị nọ n’ebe dị anya nụrụ mkpọtụ ha na-eme.
“Ngwá ọgụ ọ bụla a ga-akpụ iji lụso gị ọgụ agaghị aga nke ọma.”—Aịzaya 54:17
Ajụjụ: Gịnị mere Nehemaya ji gaa Jeruselem? Ụbọchị ole ka o were iji rụchaa mgbidi Jeruselem?
Nehemaya 1:1-11; 2:1-20; 4:1-23; 5:14; 6:1-19; 12:27-43
Ihe Akwụkwọ Nehemaya Na-ekwu
Akwụkwọ Nehemaya na-akụziri ndị na-efe Chineke taa ihe bara uru.
Kaadị Akụkọ Nehemaya
Akụkọ Nehemaya na-akụziri anyị na anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi n’ọnọdụ ọ bụla.